Top 9 Free iPhone Data Recovery Software maka Mac na Windows
IPhone apụtawo dị ka a na-ewu ewu Smartphone oke maka ọrụ gburugburu ụwa. Ka anya dị ka anyị na-enweta a ọhụrụ variant ke ahịa, e nwere na-eto eto ina maka ekwentị dị ka ntinye akwụkwọ ego ka a na-eji ọkụ nde si dị iche iche kọntinent. Gịnị mere iPhone-ewu nnọọ ewu bụ egosipụta ọ na-enye na okwu nke arụmọrụ. Nri ka ụdị ihe ọ bụla nke onye ọrụ, site azụmahịa okike, iPhone awade mgbanwe na-ebu gị niile ụlọ ọrụ na ndị ọzọ na-arụ ọrụ na otu ngwaọrụ. Otú ọ dị, a na-esonyere na ụfọdụ nzukọ ufodu ebe ndị mmadụ na ida ha data. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na ọtụtụ ihe; na-amalite na gị data na-emerụ ruru ụfọdụ na-emerụ ihe omume, ma ọ bụ mmadụ na mberede. Anyị depụta si 10 free iPhone Data Recovery Software omume na ị nwere ike iji ma na gị Windows kọmputa, ma ọ Apple Mac, na n'akụkụ, anyị na-agụnye reviews site n'elu ranking mmadụ mgbasa ozi portals.
System akwado: Ohere 8.1, 8, 7, Vista, XP (32-bit & 64-bit), Mac OS X 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, na 10.6 (32-bit & 64-bit)
Windows: Free Trial Version maka Windows
Mac: Free Trial Version maka Mac
Full Version Ahịa: $59.95
Na-enyere aka weghachite nta ọ bụla ụdị data site na ngwaọrụ gị
Aka weghachi gị data si iTunes ndabere
Export n'ihi na 8 ụdị nke data dị
Mfe iji, ngwa ngwa, na fashionable
Kwalite izute ike mkpa nke iOS-8
Enyere na Iweghachi data si iCloud
The interface bụ pụtara dị mfe, na-eme ka ọ dị mfe iji
Nkwado maka iOS 8-eme ka ọ a pụrụ ịdabere na nhọrọ
Data Doppler-agba bụ oke itunanya ngwa ngwa
Affordable price mgbe tụnyere ndị ọzọ omume na ahịa
Main atụmatụ ndị adịghị na-ekpe ikpe version
Performance na iOS 9 lefts na-enyocha
Nyocha Site na ndị ọzọ Portals:
Download.Com: Aiseesoft Fonelab na-aghọ a ìhè, ngwa ngwa, na mfe na-eji ngwọta bụrụ na ị chọrọ naghachi ehichapụ faịlụ na data gị iPhone, iPad, na iPod Touch, nakwa dị ka gị iCloud na iTunes backups. Ọ bụghị free, ma ọ bụrụ na ị chọrọ nke a na ụdị software, mgbe ahụ, onye a bụ ruru price.
TopTenReviews.com: Aiseesoft Fonelab bụ oké nhọrọ maka iPhone data mgbake, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji na ekwentị gị bụ isi maka azụmahịa, dị ka software nwere ike naputa ọtụtụ ndị ederede data. Ọ bụrụ na ị na-eji na ekwentị gị n'ihi na ihe onye me, Otú ọ dị, i nwere ike-emechu ihu na enweghi ike n'ụzọ zuru ezu weghachi photos bụrụ na i nwere ndị ọhụrụ iPhone.
TheTechHacker.com: N'oge ule, anyị chere na ihe omume ahụ bụ nnọọ mfe iji rụọ ọrụ na mfe iji naghachi. Aiseesoft Fonelab bụ a zuru okè omume naghachi furu efu iOS ngwaọrụ data, ọ na-abịa dị ka a free na-agbalị na-akwụ ụgwọ version.
iMobie ekwentị Nnapụta
Systems akwado: Ohere 8.1, 8, 7, Vista, XP ((32-bit & 64-bit), Mac OS X 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6 (32-bit & 64-bit)
Mac: Free Trial Download N'ihi Mac
Full Version Ahịa: $ 49 (Personal License, na-enye Ahịa)
Na-elekwasị anya ya ego na-eweghachiri 22 ụdị nke dị mkpa iPhone data ụdị
Photos nwere ike ịbụ restores si iTunes, ọbụna ma ọ bụrụ na data na-ezoro ezo
Ozi na oku akụkọ ihe mere na-echekwa na HTML format
Music, Skype ozi, na ndị ọzọ na mgbasa ozi faịlụ na-exported na kọmputa mgbe iPhone bụghị inweta
Kwalite na-akwado iOS 8 na ọhụrụ version nke iPhone 6
The interface dị mfe iji
A humanized nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu na-eme ka ọ dị mfe maka a mbido na-eso
Ngwa ngwa dakọtara na ma, Windows na Mac
Enyere na Iweghachi dị iche iche ụdị akwụkwọ
Doppler oge bụ nnọọ ogologo, na ike na-mgbakasi
Ọ bụghị nwalere maka ọhụrụ variants nke iPhone na iOS 9
BestiPhoneDataRecovery.com: Site anyị ule ahụmahụ, na nnukwu downside nke a software bụ oge dị ukwuu ngwa na-ewe iji wuchaa a miri emi Doppler: n'ihi na a Micro SD 8 GB kaadị, ọ ga-ewe ihe 2 awa iji wuchaa dum usoro. Nke a pụtara na ịchọ ibu kaadị (ma ọ bụ ọbụna usoro na ukwuu esịtidem nchekwa), oge a nwere ike ịbụ ọbụna ukwuu. Ma, ọ bụ ihe kwere nghọta na a siri usoro dị ka nke a nwere ike omume na-eri oge ụfọdụ iji nweta ya dechara nke ọma.
TapScape.com: PhoneRescue nwere ya ojiji ma ọ bụ maa bụghị siri ike, kpokọtara lifesaver na Mmepụta-eme ka ọ bụrụ. Ọ nwere ihe ịkpọ visual ịke na sleek mkpuchi, ma na-apụtaghị ìhè Filiks mkpa ọrụ - na niile nke o kwesịrị ịbụ kpamkpam streamlined na ndị ọzọ kọwara n'ụzọ doro anya. E nwekwara ọtụtụ kwụsie ike mbipụta na play, na ihe omume mgbe nile ịkwụsị na-atụghị anya na ma nyiwe. Dị ka a ụzọ jidere ochie data na-enweghị ime a zuru backdate weghachi, PhoneRescue ga-enye ụfọdụ uru, ma iMobie ga-mkpa nụchaa ha ngwaahịa n'ụzọ tupu ọ bụ nke zuru okè data mgbake ngwá ọrụ.
TopTenReviews.com: The price bụ na elu n'akụkụ nke nkezi, ma ikike na-ekpuchi elu atọ Obodo kọmputa. The FAQ ndepụta na emeputa website bụ ike ịgwụcha agwụcha, ọ bụ ezie na a oru nkwado na nọmba ekwentị ozugbo anya. E ọnụ, uru na drawbacks-eme ka a software ihe zuru ezu nhọrọ naghachi ehichapụ foto site na iPhone, ma ọ bụghị ihe dị ịtụnanya otu.
Wondershare Dr. Fone maka iOS Review:
Akwado os: Ohere 8.1, 8, 7, Vista, XP (32-bit & 64-bit); Akwado os: Mac OS X 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6 (32-bit & 64-bit)
Windows: Free Trial Download maka Windows
Full Ahịa: $69.95
Nwere ike naputa data niile iOS Devices, iCloud ndabere, na iTunes
Facility iji weghachi ozi, oku, ncheta, na yiri data
E kwalite izute mkpa nke iOS 8
Ngwa data nwekwara ike-natara, n'ihi na WhatsApp, Instagram, wdg
I nwekwara ike weghachite data ma ọ bụrụ na ngwaọrụ na-crashed, Ezuru, na-achọ jailbreak
The data mgbake-agba bụ ịja mma
The interface bụ aka n'ihi beginners
Echefuola faịlụ nwere ike previewed tupu mgbake usoro na-butere
Dakọtara na ma, Windows na Mac
Nyocha si Social Media Portals:
BestiPhoneDataRecovery.com: Ozugbo ị jikọọ na ngwaọrụ kọmputa, data mgbake ngwá ọrụ ga-akpaghị aka iṅomi n'ihi na ụdị nke furu efu faịlụ maka mgbake. E wezụga, ikike ịhụchalụ niile furu efu data si iPhone, iTunes / iCloud ndabere tupu ị naghachi ha bụkwa ihe uru, mgbe nile, na-enye ihe nche gị tupu ikpeazụ data mgbake. Ma ọ chọrọ ka a kwuru na free version naanị-egosi na ị niile recoverable faịlụ na anatara, ma ọ dịghị ike ka ị na weghachite ihe ọ bụla.
PCWorld.com: Dr. Fone bụghị zuru okè, dị ka ọ na-naghachi niile m na-ehichapụ faịlụ emebibeghị, ma ọ bịara nso. N'ezie, ọ bụ pricey, ma ọ bụrụ na ị na mmadụ na mberede ehichapụ ihe dị mkpa foto ma ọ bụ faịlụ, ị maara na ihe ụfọdụ dị oké ọnụ ahịa.
CNET.com: suke ruru ka ihichapụ ozi ederede, foto ma ọ bụ ndị ọzọ data site na mberede si gị iPad, iPod aka ma ọ bụ gị iPhone? Ọ bụ na unu imebi ma ọ bụ agbaji gị iPod aka ma ọ bụ iPhone, nke nwere mkpa data na ya? Nwere gị data e wepụrụ n'ihi a okpu update? Get dọkịta na! Wondershare Dr. Fone bụ onye ọrụ-enyi na enyi ngwá ọrụ na-enyere gị weghachi videos, photos, ederede ozi, kọntaktị, memos, oku na ndekọ na kalenda. Ọbụna Safari ibe edokọbara ina laghachiri ha n'ọnọdụ kwesịrị na gị iDevices. Olee otú nke ahụ ga-ekwe omume? Ọ na-achọ dị nnọọ atọ mfe nzọụkwụ. Ị nwere ike inyocha faịlụ na ị furu efu na mgbe ahụ naghachi ha nnọọ ka na.
Leawo iOS Data Iweghachite
Systems akwado: akwado os: Ohere 8.1, 8, 7, Vista, XP ((32-bit & 64-bit); akwado os: Mac OS X 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6 (32-bit & 64-bit )
Windows: Free Trial Download N'ihi Windows
Mac: Free Trial Download maka Mac
Ikike na-agbake data si iPhone ozugbo, na site kwa na iTunes ndabere
12 dị iche iche nke data-ụdị nwere ike natara
Dịgasịa faịlụ formats si gị iPhone nwere ike weghachiri eweghachi
Faịlụ nwere ike previewed na ẹdụk tupu mgbake
The interface adọta uche nke onye ọrụ
E nwere nkwado iji weghachite data niile Apple ngwaọrụ
The interface bụ pụtara mfe iji
Dakọtara na multiple nsụgharị nke iOS na nkwado maka iOS 8
E bụ nhọrọ ka ịhụchalụ faịlụ na iyo ha dị ka gị mkpa
Ọ bụghị-anwale iOS 9
Full version dị mkpa ma ọ bụrụ na onye na-achọ ịzọpụta faịlụ ka ha na kọmputa
Techywood.com: E wezụga data mgbake ọrụ, na multi-ọtọ data mgbake omume na-onwem na iTunes ndabere adịrị nakwa dị ka data ndabere ọrụ, nke nwere ike ngwa ngwa iṅomi ma wepụ 12 iche iche nke faịlụ site na iTunes ndabere ma ọ bụ nweta na nkwado ndabere na 12 iche iche nke faịlụ site kpọmkwem ịgụ isiokwu gị iOS ngwaọrụ. Na n'elu nke, usoro ihe omume na-enyere gị mbupụ niile scanned faịlụ na mpaghara PC na ogbe.
iPadInTouch.com: N'ihi na ọtụtụ akụkụ, Leawo iOS Data Recovery bụ magburu onwe ya n'ihi ihe ọ bụ. Ọ bụrụ na ị na-eji Windows na nwere otu iOS ngwaọrụ, ọ dị oké aka. ICloud na iTunes ndabere na-ma ukwuu, ma ha na-agaghị àjà ohere ehichapụ ọ bụ furu efu faịlụ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ị kwesịrị ị eleghị anya download free ikpe mbụ.
BestiPhoneDataRecovery.com: Leawo iOS Data Recovery-arụ ọrụ niile ụdị nke iPhone, iPad na iPod. Ọ dịghị mkpa inwe ndị ọhụrụ iOS version na ndị a. Na ihe na-m mmasị a otutu bụ na o yiri ka ọ ga-e "n'ihi na ndị mmadụ" na ọ bụghị "n'ihi na injinia". Na anya na-eche, ịrụ ọrụ, ntuziaka na ihe niile ndị doro anya na nkenke, na-enweghị buttons nke nhọrọ, na nnọọ uche n'ihe ngwaahịa na-enye.
Full Version Ahịa: $69.95
Mgbake nke niile nkịtị data bụ omume
E nwere nkwado maka data mfu nke nwere ike ime n'ihi na nkwalite, jailbreak, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ mberede
Kwalite izute mkpa nke iOS 8 na iPhone 6
Nhọrọ ịhụchalụ faịlụ n'ihu na-agbake ha
Ọ bụ ihe dị mfe ngwá ọrụ, na ya mere, uka mkpesa
Kpam kpam free ngwá ọrụ
Interface dị mma
Njikọta na iPhone bụ mgbe ụfọdụ siri ike
Ọ bụghị-anwale iOS 9 na ọhụrụ variants nke iPhone
Ọ bụghị ihe niile faịlụ nwere ike Ewepụtara mgbe niile
BestiPhoneDataRecovery.com: Mgbe ị ulo oru gị EaseUS MobiSaver, ị ga-ịkwụpụ ngwaọrụ na nkwụnye na o ziri ezi ọzọ. Ihe bụ nsogbu bụ na ọbụna kọmputa OS ghotara gadget, na free omume jụrụ-ahụ ya. Nsogbu nọgidere ruo ọtụtụ minit, na-enweghị arụ ọ bụla ọnọdụ mgbanwe ahụ, free iPhone data mgbake software nabatara iPhone na jisiri iji nyochaa njirimara gị ozi. Na a okwu, MobiSaver EaseUS bụ usoro ihe omume jupụtara ezi ihe n'obi, mfe iji, ma ọ na-ajụ oké ndidi si onye ọrụ, dị ka mgbe ụfọdụ ọ na-adịghị ewe-eme eme.
PhoneDog.com: EaseUS si MobiSaver nwere ike ịbụ a bara uru ịba uru n'ihi na ị bụrụ na ị chọrọ na-agbalị na zọpụta ụfọdụ data gị iPhone ma ọ bụ iPad. M akwado ya ọzọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ furu efu photos, videos, ndetu, kọntaktị ma ọ bụ ndokwa ibe dị ka ndị a faịlụ ka bụ ojiji na gị Mac. MobiSaver ga-karị uru ma ọ bụrụ na ọ pụrụ ozugbo weghachi data ngwaọrụ gị, ma ọ bụrụ na ọ na-azọpụta gị na anụ na okụt na otu ihe ị emecha chọrọ azụ - ọ pụrụ ịbụ ruru $79.95 arịọ price. E wezụga, ọ bụ free ịnwale na-ahụ maka onwe gị.
TheSmartPhoneAppReview.com: Ihe m mmasị banyere EaseUS MobiSaver Free bụ otú mfe ọ bụ iji. Ihe niile na-arụ ọrụ kpọmkwem otú o kwuru na ọ ga. Ịbụ a freeware, Otú ọ dị, na-eme ka ọ dị nnọọ ịmachi. Naanị 5 kọntaktị nwere ike weghachiri eweghachi ozugbo na faịlụ a ga-ahọrọ n'otu otu mgbe. Ozi mgbake na-adịghị gụnyere. N'ezie ọ bụrụ na ị ga-achọ nweta nkwalite na-akwụ $69.95, ị nwere ike nweta a pro version na ga-adị n'elu gị usoro na free tech support gụnyere.
Free iPhone Data Iweghachite:
Systems akwado: akwado os: Windows 8, 7, Vista, XP, Win 2000, na n'elu.
Mac OS X 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10,8, 10.7, 10.6
Kpọmkwem naghachi data si iOS ngwaọrụ na iTunes ndabere
Facility naghachi ozi, oku, na ihe nchọgharị ibe edokọbara
Kwalite na-akwado iOS 8 na ọhụrụ variants ulo oru na 2014
Data furu efu ruru ngwaọrụ nweta nkwalite, jailbreak, nwere ike Ewepụtara
9 iche iche nke data na ụdị na-10 ụdị nke media ọdịnaya ụdị nwere ike Ewepụtara
Enye aka n'ihi na ngwaọrụ na iOS 8
Faịlụ nwere ike previewed tupu mgbake usoro na-butere
Ọ bụghị-anwale iOS 9, na ọhụrụ Apple variants maka 2015
Techprevue.com: Ọ bụghị nanị iPhone data mgbake software, ma eluigwe na ala iOS data mgbake software na-akwado naghachi niile Apple si iOS ngwaọrụ malite niile ụdị na Apple mgbe bipụtara. IOS ngwaọrụ na-pụtara iPhone, iPad na iPod.
iSkysoft.com: Mgbe ị ehichapụkwa gị niile data na gị iPhone, nweta nkwalite gị iOS, ma ọ bụ weghachi ụlọ ọrụ ntọala mgbe ahụ ị hapụ data mgbe ị nwere ike eji nke a usoro ,. Nke a ọzọ ezi enyi gị iPhone 6. Ọ nwere ike iweghachi ozi, na-ekwu safari ibe edokọbara, na kọntaktị na akpọ akụkọ ihe mere dị nnọọ ole na ole aha. Ọ dị mfe iji n'ihi na ya ọrụ na onye-interface. Ọ na-enye gị ohere iji weghachite ndabere data si iTunes. Mgbe agbake faịlụ na ị nwere ike kpamkpam nyefee ka Okwu, HTML, Ọnụ Ọgụgụ, Pages, HTML mere na ị nwere ike ndabere ha.
Systems akwado: Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP
Nwere ike naputa ruo 9 ụdị nke data gị iOS ngwaọrụ
Nwere ike inyere weghachite 17 ụdị nke data si iTunes nkwado ndabere na mpaghara iCloud
Na-akwado data transfer atọ dị iche iche ụdịdị
Pụrụ inye aka na okenye iOS ngwaọrụ
Nwere ike iweghachi a ọnụ ọgụgụ nke faịlụ na ụdị
Na-ewe oge dị ukwuu iṅomi ngwaọrụ
Enweghị enye price, usoro ihe omume dị obere ọnụ
Cisdem.com: iSkySoft iPhone Data Iweghachite maka Mac bụ a onye-nkwụsị data mgbake ngwọta iji weghachi iPhone photos, kọntaktị, ozi na ndị ọzọ ole na ole clicks. Nke a iOS mgbake software ike wepụ na-agbake ihe ị chọrọ site na iCloud na iTunes ndabere, gụnyere photos, ngwa photos, ozi, kọntaktị, na-akpọ ihe mere eme, ozi olu ozi olu, WhatsApp ozi, Notes, Kalinda, Ncheta, Safari ibe edokọbara, olu memo na ngwa akwụkwọ, dị nnọọ ka ihe Cisdem iPhone Iweghachite na-eme.
iGeeksBlog.com: The isi ọrụ nke iSkySoft na-maara nke ọma na-agbake data na-efu, na mberede ehichapụ. A na-eme dị nnọọ ọtụtụ mgbe ị na-ekpocha ihe, ma ọ bụ mgbe ị na-agbalị otu n'ime ndị iCloud syncs. Echefuola photos, kọntaktị, ozi: niile nke ndị a na-traceable na iPhone / iPad ma ọ bụ ihe ọ bụla iOS ngwaọrụ. ISkySoft mîdaha ya na ọgụgụ isi iji naghachi ndị a furu efu iberibe data na-agbake ha dị ukwuu dị ka o kwere omume.
Business2Community.com: N'ebe a software na-enye gị nhọrọ nke Michael faịlụ na ị ga-ahụ data egosipụta na aha ha na faịlụ owuwu. Ị ga-esi na-ahụ ihe oyiyi, ozi ịntanetị ma ọ bụ faịlụ ederede kwa, ma ọ bụrụ na ha na-adịghị emebi ma ọ bụ overwritten. Nke a software bụ dakọtara na Windows 8 na kasị akpali ihe bụ na i nwere ike mfe ịkwụsị scanning mgbe ọ bụla ị chọrọ ma ọ bụ i nwere ike ịzọpụta jupụtara Doppler akụkọ maka ọdịnihu ojiji. Nke ahụ bụ ihe mere ndị mmadụ ga-maa-enye ya a na-agbalị, n'ihi na ọ na-adịghị mgbagwoju anya.
Systems akwado: iPhone 6s Plus / 6s / 6 + / 6 / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 iTunes 12.2 na iOS 9.
Naghachi ruo 20 iche iche nke iPhone data ụdị na-enweghị backups
Atọ naghachi ụdịdị maka mgbake nke data
Na-akwado ka mmekọrịta kọntaktị, ozi, na-ekwu kpọmkwem na iPhone
Store faịlụ site na iTunes ndabere gị na kọmputa
Nwere ike naputa nta ọ bụla ụdị data faịlụ ụdị site na kọmputa gị
Kwalite maka ojiji na iOS 8
Enweghị ihe ọ bụla na-enye, price nke usoro ihe omume dị elu
Ike-eji ndị ọzọ na iOS 8 ngwaọrụ
iGeeksBlog.com: Tenorshare iPhone Data Iweghachite si free version ga-egosi gị niile faịlụ na ọ achọpụtara (maka mgbake) Ma iji naghachi ha ka ha na kọmputa gị, ị ga-mkpa aha. The $69.95 price-mkpado bụ nkpoda, karịsịa n'ịtụle dị ọnụ ala karịa uzo ozo nke, aghaghị m ikweta,-adịghị dị ka mfe ma dị irè dị ka Tenorshare ọ bụ ezie na yiri otú ahụ. Ọzọkwa, m na na na nụrụ mara ezigbo mma ihe banyere Tenorshare nkwado otú ị ịzụ n'ime ihe n'ezie siri ike.
TopTenReviews.com: Tenorshare bụ n'ihe banyere ngwaike ọ na-akwado. Ọ na-akwado ma GSM na CDMA ekwentị ụdị, ka gosiri ha na website. Malite na iPhone 3, nkwado na-aga n'ihu n'ụzọ nile elu site iPhone 6 Plus. Ị nwere ike ịnweta free ọnwụnwa niile iterations nke software otú ị pụrụ ijide n'aka na ọ ga-juputara ijere gị mgbake mkpa. Maka ndị na-obi abụọ ọ bụla, na emeputa awade oru nkwado awa 24 n'ụbọchị, 7 ụbọchị n'izu.
iMobie.com: Tenorshare iPhone Data Iweghachite, dị ka aha-apụta, bụ data mgbake software nanị maka iPhone. Ọ na-enye gị 3 mgbake ụzọ na-enyere gị aka na-azụ ehichapụ ọ bụ furu efu data si iPhone, iTunes nkwado ndabere na mpaghara iCloud ndabere. Ọ na-akwado na-agbake ruo 15 faịlụ na ụdị na iPhone agụnye Ozi, Ndi ana-akpo, Edeturu, Photos, Videos, App data, oziolu, wdg na ọ na-enye ohere ọrụ ka ịhụchalụ data tupu mgbake na selectively naghachi.
Nwanna Soft iRefone
Systems akwado: Windows (Ofụri Esịt dakọtara na Windows 10 / 8.1 / 8 / XP / Vista)
Windows: Free Trial Download
Full Version Ahịa: $49.95
Naghachi data si ọtụtụ iOS Devices
Weghachite data si iTunes ndabere na ngwa ngwa ọsọ.
Maliteghachi data si iOS Devices na iOS 7, iOS 6, iOS 5, na ndị ọzọ.
Na-azụ / ndabere furu efu data si iOS Ndi ana-akpo, oku History, Ozi, Kalinda, Nchetara, Safari Bookmark, & edeturu.
Ndabere na elu data na igwefoto Roll (gụnyere videos), Photo Stream, Message Mgbakwụnye, Voice Memos, & Safari History.
Akpaghị aka ịchọpụta iTunes ndabere na ejikọrọ iOS ngwaọrụ.
One-pịa Detuo & iṅomi iDevices / iTunes ndabere data na ngwa ngwa ọsọ
Preview dị data dị ka oyiyi, ozi, oku akụkọ ihe mere, wdg
Easy ikwu ehichapụ data na ẹdude data.
Ọ bụghị-anwale iOS 9 na Apple variants ulo oru na 2015
Ụgwọ bụ ntakịrị arọ na n'akpa uwe
Get-iOS-Data-Back-Recovery.com: Nke a dị ike iPhone / iPad / iPod data mgbake software nwere ike inyere gị aka naghachi ruo 12 ụdị isi data dị ka ozi kọntaktsị, oku History, Edeturu, kalịnda, ihe Nchetara, WhatsApp na Safari Ibe edokwubara selectively. Onye ọrụ-enyi na enyi interface na humanized ọrụ na onye-ndu-eme ka ọ dị mfe na mfe iji. Ihe bụ ihe ọzọ, na ngwa ngwa na-agbake ọsọ-eme ka ọ eguzo na iPhone data mgbake ahịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe azụ ehichapụ data si iPhone on Mac, biko atụgharị Brorsoft iRefone maka Mac.
Top 10 Audio teepu maka Mac OS X ei Capitan
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site na laptọọpụ
Olee otú Naghachi Photos si transcend SD Kaadị
> Resource> Naghachi> Top 9 Free iPhone Data Recovery Software maka Mac na Windows